कस्ता पुरुषसँग महिला ‘सेक्स’ गर्न रुचाउँछन् त? – Health Post Nepal
कस्ता पुरुषसँग महिला ‘सेक्स’ गर्न रुचाउँछन् त?
२०७८ भदौ १२ गते १९:४८
तपाईंहरुले विचार गर्नु भएकै होला वा सुन्नु भएकै होला, कुनै पुरुषसँग धेरै महिलाल‍े सम्बन्ध बनाएका हुन्छन्। अधिकांश महिला उक्त पुरुषप्रति आकर्षित भएका हुन्छन्। विनाकारण त कुनै महिला सम्बन्ध बनाउँदैनन्। तर, कुनै पुरुष यस्तो मामिलामा सधैं अघि किन आउँछ त, के कारण होला कि अधिकांश महिला कुनै पुरुषप्रति सेक्सका लागि विशेषरुपमा आकर्षित हुन्छिन् त?
आउनुस् जानौं कस्ता पुरुषप्रति महिला सेक्सका लागि आकर्षित हुन्छन् :
महिलाहरु आफ्नो जोडी छनोट गर्दा पुरुषको उचाइलाई विशेष ध्यान दिन्छन्। उनीहरु केटाको औसतभन्दा केही माथिको उचाइप्रति आकर्षित हुन्छन्। त्यसका लागि तपाईंको उचाइ १८४-१९५ सेन्टिमिटरको बीचमा हुन आवश्यक छ। एक सर्वेका अनुसार ८० प्रतिशत महिलाले जीवनमा एकपटक अग्लो कद भएका पुरुषसँग सेक्स गर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए।
धेरै पटक देखिएकै सुनेकै कुरा हो कि, अधिकांश महिलाहरु बलियो ज्यान (मस्कुलर बडी) भएका पुरुषप्रति विशेषरुपमा आकर्षित हुन्छन्। यदी कोही पुरुष फिट छ भने उसप्रति महिला आकर्षित मात्र हुँदिनन् सेक्स गर्नलाई पनि लालायित हुन्छिन्। एक महिला सधैं चाहन्छिन् कि, उसको पार्टनर फिट होस्। उसको पेट बाहिर निस्केको नहोस्।
‘भी’ आकारको ज्यान
यदी तपाईंको शरीरको बनावट वा ज्यान ‘भी’ आकारको छ भने पक्कै पनि स्त्री तपाईंप्रति आकर्षित हुनेछिन्। यो कुरा सर्वेले पनि पुष्टि गरेको छ कि यस्तो ज्यान भएका पुरुष महिलाको नजरमा सेक्सी देखिन्छन्। यस्ता ज्यान भएका पुरुषहरुसँग बढीभन्दा बढी महिला साथी हुने गर्छन्। पहिलो पटकको भेटमै महिला आकर्षित हुने गर्छिन्।
एक आकर्षक अनुहारमा आकर्षित नहुने को होला र? महिला पनि पुरुषमा एक सुन्दर र मिलेको अनुहार खोज्छन्। पुरुषको बलियो चिउँडो, ठूलो निधार तथा तल्लो बंगार अलि ठूलो भएको अनुहार महिलालाई विशेष मन पर्छ।
किशोरावस्थामा केटाको आवाज विस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। आवाज भारी हुँदै जान्छ। एक ‘बोल्ड’ र ‘कमान्डिङ’ आवाजले महिलालाई विशेषरुपमा आकर्षित गर्छ। यस्ता पुरुषसँग महिला चाँडै आकर्षित हुने र सेक्सुअल सम्बन्ध बनाउन चाहने हुन्छन्।